बदनाम हुँदै बाहिरिएकालाई धमाधम नियुक्ति दिँदै ओली, अब गोकुल बास्कोटा ल्याउने ! - Media Dabali
बदनाम हुँदै बाहिरिएकालाई धमाधम नियुक्ति दिँदै ओली, अब गोकुल बास्कोटा ल्याउने !
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति गर्न बाधक बनेपछि उनको आलोचना सुरु भएको छ ।
बुधबार बिहान चाबहिलमा ओलीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन नै भयो । कुलमानलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिन प्रदर्शन भएको हो । ओली सरकारले जनताको काम गर्नेलाई नियुक्ति नदिने तर बदनाम हुँदै बाहिरिएकालाई धमाधम नियुक्ति दिन थालेको छ ।
अर्थमन्त्रीमा साढे दुई वर्ष बसेर बदनामी कमाएका डा.युवराज खतिवडालाई मन्त्रीसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराएर विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने ओलीले मुलुकमा लोडसेडिङ हटाउने कुलमानलाई कानुनी अड्चन देखाउँदै नियुक्ति गरेननन् ।
जबकि खतिवडा कर्मचारी हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेर सधैं अवसर पाउने व्यक्ति हुन् । यस्तै, उनले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका छन् ।
हारेका व्यक्तिलाई पुनः सांसद बनाएर मन्त्री बनाउन खोजिएको भन्दै जनताले आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारमा रहँदा गौतमले निकै विवादित छवि बनाएका थिए ।
सधैं राजनीतिक नियुक्ति खान सफल उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई ओली सरकारले झन्डै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइसकेको थियो ।
यदि समयमै मिडियाले समाचार बाहिर नल्याएको भए उनी अहिले सरकारी बैंकको अध्यक्ष भइसक्ने थिए । तर, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा धेरै टीकाटिप्पणी र आलोचना भएपछि उनी पछि हटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ७० करोड घुसकाण्डमा मुछिएका पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई पुनः मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् ।
त्यसका लागि उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट क्लिन चिट दिलाउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटे पनि पुनः बालुवाटारमा हालीमुहाली गर्न भित्रेपछि बास्कोटालाई पनि भित्र्याउन लागिएको स्रोतले बताएको छ ।